Amagqabantshintshi ombala nge Photoshop. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngeentsuku ezikhethekileyo njengeHalloween, sithanda ukwenza ezinye amaqela omxholo okanye uyilo olumele le mihla. Phakathi kwesinxibo, izinto ezinemeko yendawo, njl., Sichithe usuku sicwangcisa ukujonga. Ngamanye amaxesha side sifune ukutshintsha siye kwi umbala weenwele zethu, Yintoni royo!
Ke ngoko, kwanamhlanje sizise i- Isifundo esikhethekileyo seHalloween, ukukufumana ngaphambi komdlalo. Siza kukufundisa indlela yokunika iinwele zakho ezo zinto zinemibala ezihambelana nomsitho.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe alula, kuba sithethile ngezinto ezibalaseleyo, emva koko Siza kukhetha icandelo leenwele ukuba sifuna ukufaka umbala. Sisebenzise i Isixhobo sepoligoni ukukhetha ezi. Emva koko sichaza imiphetho yokhetho ngokuchaphazela iqhosha lokuCoca iEdge, ukwenza ulungelelwaniso olukhethiweyo lube lukhuni ngokwahluka kokufiphala komphetho.
Okokugqibela ekufuneka sikwenzile kukusebenzisa uhlengahlengiso lolungelelwaniso, njengoko besesitshilo kwezinye iitutorials, ezi zisetyenziselwa ukungasebenzi ngqo emfanekisweni kwaye ngenxa yoko akufuneki ziqale ekuqaleni ukuba siyayinyusa.
Kule meko ukhetho esiza kulusebenzisa kolu luhlu luya kuba ngumnxeba ulungelelwaniso lombala. Kwimeko yethu, songeze iithoni ezibomvu kunye netyheli encinci kukhetho, sikwahluka ngokulungelelaniswa okuncinci kombala oluhlaza ukuze ekugqibeleni sifezekise ithoni yeorenji.
Emva kokusebenzisa ulungelelwaniso lolungelelwaniso, singapeyinta ezimhlophe kuyo, kwaye iya kusebenza kuseto olunye kweminye imicu yeenwele.
Kwaye ke sifumana iinwele ezinemibala ebonakalayo, kungekudala eza kuba sisigqubuthelo seHalloween. Khumbula ukuba inokwahluka kweminye imibala, kwiimeko ezahlukeneyo okanye ezinye izizathu apho sifuna ukusebenzisa le mphumo esiyinike yona kwesi sifundo. Ngoku lithuba lakho lokuzama le khokelo kuyo nayiphi na into oyifunayo.
Siyathemba ukuba olu hlolisiso lweHalloween lube luncedo kuwe kwaye, kwabo bakhethe ukwenza ngokuchanekileyo njengoko sinikezile, uya kufumana iziphumo ezikufutshane naleyo siyenzileyo. Ukuba unemibuzo okanye uluvo, ungahlomla apha ngezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Amagqabantshintshi ombala ngeFotohop.